Hand, Foot, and Mouth Disease (HFMD) (January 2022) - Ministry of Health (MOH) Myanmar
Hand, Foot, and Mouth Disease (HFMD) (January 2022)
Hand, Foot, and Mouth Disease (HFMD) ဆိုတာ တကယ်တော့ ကလေးတွေမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ရောဂါပါ။ တစ်ခါတလေတော့ လူကြီးပိုင်းတွေမှာလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် ပါးစပ်တစ်ဝိုက်၊ နှုတ်ခမ်းအတွင်းနံရံတွေနဲ့ လက်ဖဝါးခြေဖဝါးတွေမှာ အနီစက်တွေ၊ အရည်ဖုလေးတွေ ဖြစ်တာပါ။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖြစ်တာရှားပါတယ်။ တချို့မှာတော့ တင်ပါးမှာလည်း အနီစက်၊ အရည်ကြည်ဖုတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပါးစပ်ထဲမှာဖြစ်တော့ အစာစားရတာ နာလို့ အစားပျက်တတ်ပါတယ်။ အဖျားရှိနိုင်တယ်။ အာသီးရောင်နိုင်ပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်(စ်)ပိုးတစ်မျိုးကြောင့် ဖြစ်တာပါ။ အများအားဖြင့် ရောဂါကူးစက်ခံထားရသူ နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးလိုက်တဲ့ အရည်တွေကတစ်ဆင့် ကူးတာပါ။ အနီစက်၊ အရည်ဖုတွေက ထွက်လာတဲ့ အရည်တွေမှာလည်း ပိုးတွေပါနိုင်သလို အနီစက်တွေပျောက်သွားပြီးရင်တောင် ရောဂါရှိခဲ့သူရဲ့ ဝမ်းမှာ ပိုးက အချိန်တော်တော်ကြာ နေနိုင်ပါတယ်။ မူကြိုကျောင်းတွေမှာ ကလေးတွေ တစ်ပြိုင်ထဲ အစုလိုက်၊ အပြုံလိုက် ကူးတတ်ပါတယ်။
မကူးအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ?
ကလေးရဲ့ ဝေယျာဝစ္စတွေလုပ်ပေးပြီးရင် လက်ကို သေချာဆေးပါ။ ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ကလေးအတွက် သောက်ရေခွက်၊ လက်ကိုင်ပဝါ၊ လက်သုတ်ပဝါ၊ တဘက်စောင်၊ သွားပွတ်တံ၊ အဝတ်အစားတွေ သီးသန့်သုံးပါ။ ကိုယ်ကလေးမှာ HFMD ဖြစ်နေတယ်ဆို တခြားကလေးတွေကို မကူးအောင် အရည်ဖုတွေ အားလုံးခြောက်သွားမှ ကျောင်း၊ မူကြို ပြန်လွှတ်ပါ။
HFMD ဖြစ်တဲ့ ကလေးကို ဘာတွေလုပ်ပေးမလဲ ?
ဗိုင်းရပ်(စ်)ကြောင့် ဖြစ်တာမို့လို့ ပိုးသတ်ဆေးမလိုပါဘူး။ အများအားဖြင့် ၇ ရက်ကနေ ၁၀ ရက်အတွင်းမှာ ပြန်ကောင်းသွားပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာ ဖြစ်တာရှားပါတယ်။ ကလေးမှာ နာကျင်ကိုက်ခဲနေတာတွေဖြစ်နိုင်လို့ ပါရာစီတမော တိုက်ပေးပါ။ ပါးစပ်နာနေလို့ အစာမစားနိုင်တာမျိုး မဖြစ်အောင် အစာပျော့ပျော့၊ ရေ နည်းနည်း ခဏခဏတိုက်ကျွေးပေးပါ။ အရည်ကြည်ဖုတွေကို သူ့အလိုလိုခြောက်သွားတဲ့အထိ စောင့်ပါ၊ မဖောက်ပါနဲ့။
အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေး၊ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါတွေမှာလည်း အနီစက်တွေပေါ်တတ်တဲ့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြသပါ။
HFMD ဖြစ်နေတဲ့ ကလေးက ခေါင်းအရမ်းကိုက်တယ်၊ အဖျားကြာရှည်နေတယ်ဆိုရင်လည်း ဆရာဝန်နဲ့ ချက်ခြင်းပြန်ပြပါ။ (HFMD ဖြစ်တဲ့ ကလေးအနည်းငယ်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်က ဦးနှောက်အမြှေးကို ရောက်သွားနိုင်လို့ပါ)
*** ပြည်သူအပေါင်း ရောဂါဘယကင်းဝေးကြပါစေ ***
❤️ NUG-MOH တယ်လီကျန်းမာ … လူတိုင်းအတွက်ပါ ❤️